Mmelite ụlọ ọrụ ngwaahịa ahịa ahịa nke Eshia
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Mmelite ụlọ ọrụ ngwaahịa ahịa ahịa nke Eshia
Everest Medicines ("Everest" ma ọ bụ "Ụlọ ọrụ"), ụlọ ọrụ biopharmaceutical lekwasịrị anya n'ịzụlite na ịzụ ahịa ọgwụ na-agbanwe agbanwe nke na-egbo mkpa ahụike dị oke mkpa maka ndị ọrịa na Asia, taa kwupụtara na ọ zụtara 1,095,000 nkịtị mbak na ihe dị ka HK $ 50 nde. n'ahịa mepere emepe n'oge site na Ọktoba 4, 2021 ruo Ọktọba 29, 2021, na ọnụahịa nke HK $ 45.63 kwa òkè. Nkọwa azụmahịa nke onye ọ bụla dị na ngalaba ntinye ego nke webụsaịtị ụlọ ọrụ.
Emere nzụta ndị ahụ n'okpuru mmemme mgbapụta òkè HK $100 nke ekwuputara ma dị irè site na Ọgọst 30, 2021. N'ọnụ ahịa òkè ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ kwenyere na mbak ya na-ere ahịa na nnukwu mbelata maka uru dị n'okpuru ha, ma nwee ike ịga n'ihu na-azụta mbak na. oghe ahịa. Ụlọ ọrụ ahụ kwadoro nke ọma ịmepụta uru maka ndị na-eketa òkè ma nwee nkwenye siri ike maka ọdịnihu ya. Dị ka nke June 30, 2021, Ụlọ ọrụ ahụ nwere RMB3,971.0 nde ego na ego dakọtara.
Companylọ ọrụ ahụ ga-eduzi nkwụghachi òkè ọ bụla dabere na ndetu na isiokwu nke mkpakọrịta nke ụlọ ọrụ ahụ, Iwu na-achịkwa ndepụta nke Securities na Stock Exchange nke Hong Kong Limited, Codes on Takeovers and Mergers and Share Buybacks, the Companies Law of Agwaetiti Cayman na iwu na ụkpụrụ niile dị n'okpuru ụlọ ọrụ ahụ.